China Masks - Suppliers uye Vagadziri - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Masks
Chiso chemeso chigadzirwa chine hutsanana, chinowanzoreva chishandiso chakapfekerwa pamhino nemhino kufuridza mweya unopinda mumhino nemhino kudzivirira magasi anokuvadza, kunhuhwirira, uye madonhwe kubva mukati nekubuda nemhino yemhodzi nemhino, uye inogadzirwa ye gauze kana pepa.
Masks ane mamwe maitiro ekusefa pamhepo inopinda mumapapu. Kana hutachiona hwekufema hunowedzera, kupfeka maski kune maitiro akanaka kwazvo kana uchishanda munzvimbo yakasvibiswa yakaita seguruva.
Masks anogona kukamuraniswa mumhepo mafirita masiki uye mweya wekupa masks.
Masiki anodzivirira ekudzivirira anogona kuganhurwa mumatsime akacheneswa uye maseru-matatu anotaridzika. Masiki-matatu maseru anogona kukamurwa kuva: masasa ekombe yekurasa, kuraswa mapaipi, masvina ekurasa svina.Dhisposable dziviriro yemaski zvinhu: isina-yakarukwa machira, meltblown firita yekotoni yakajairwa saizi: 17.5cmx9.5cm
Read More Tumira Inquiry
Chinhu chikuru kupfeka Vana Masks ndiko kudzivirira guruva rekunze kana hutachiona kubva mumuviri.
Izvi zvinotevera ndezve Adult Mask zvine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Adult Mask.
Masocurity ehurumende anoshandiswa kusefa mweya unopinda mumhino nemuromo. Masks ehutsanana anodzivirira anodzivirira magasi anokuvadza, kunhuhwirira uye madonhwe emvura kubva mukati nekusiya iyo mhombwe nemhino. Masks ehutsanana ehukama anonyanya kukamurwa kuva masks ekotoni, masiki asina-kurukwa, masks epolymer, akagadziriswa kabhoni puru yefafita masks, uye activated kabhoni fiber inonzwa masks.
Chokuvharisa kumeso chinonzi n95
Iyo N95 maski ndeimwe yemapfumbamwe ekudzivirira masks ekudzivirira akasimbiswa neNOSOSH (National Institute for Occupational Safety uye Hutano). Iyo N95 masiki haisi chaiyo yakagadzirwa zita. Chero bedzi ichisangana iyo N95 yakajairwa uye ichipfuura iyo NIOSH ongororo, inogona kunzi N95 mask. Iyo N95 maski inogona kushandisirwa zvimisikidzwa iine aerodynamic diimita ye2,24 ± 0.6 Î¼m (dhayamita dhayamita 0.075 Î¼m ± 0.020 Î¼m). Iko kuchera kwakanaka kunosvika pamusoro pe95%.
Masiki ekurapa anonyanya kugadzirwa neketi imwe chete kana kupfuura emachira asina kuvezwa. Iyo huru yekugadzira maitiro ekugadzira masks ekurapa anosanganisira meltblown, spunbond, inopisa mweya kana acupuncture, nezvimwewo, izvo zvinoenderana nekudzivirira zvinwiwa, kusefa zvinhu uye mabhakitiriya, uye chipenga chinodzivirira chekurapa.Medical masks ane maski uye tambo inosimbisa. Masiki ekurapa akapatsanurwa kuita dumbu remukati, yepakati denderedzwa uye yekunze danga. Iyo yemukati yakasarudzika sanitary sanze kana isina-yakarukwa jira. Mucheka usiri-waakarukwa kana Ultra-mutete polypropylene meltblown zvinhu dura.
Wholesale Masks yakagadzirwa neChina kubva kufekitari yedu. Fekitari yedu inonzi Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd inova imwe yevagadziri uye vatengesi vanobva kuChina. Kugamuchirwa kutenga Masks nemutengo wakaringana uyo une CE, FDA. Iwe unoda here mutengo wemutengo uye makotesheni? Kana iwe uchida, isu tinokwanisawo kukupa.